Pakistana : Fipoahana nisesisesy tao amin’ny tobin’ny tafika tao Karachi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2011 21:00 GMT
Re izao fa nisy ny fipoahana nisesisesy tao amin'ny Tobin'ny seranan'ny tafika an-dranomasina tao Pakistana ao Karachi, teo amin'ny manodidina ny amin'ny 11 ora alinateo ny 22 mey 2011. Ny P.N.S. Mehran (Tobin-tafika an-dranomasina sy an-habakabaka Mehran), foto-drafitrasa ambenan'ny Tafika an-dranomasina pakistaney fatratra ao Shahrah-e-Faisal, no etamazaoron'ny tafika an-habakabaka. Mpampihorohoro valo hatramin'ny folo no niditra an-keriny tao amin'ny tranom-bakoky ny toby ary nanafika tamim-piadiana tao amin'ny PNS Mehran ka nanimba fiaramanidina mpanara-maso P-3C Orion tamin'ny balafomanga.
Voatatitra fa fifampitifirana mahery vaika sy lela afo miredareda no niseho tao raha toa ka namaly bontana ny mpitandro ny filaminana sy ny miaramila. Nitatitra ny Reuters fa miaramilan'ny tafika an-habakabaka pakistaney efatra no namoy ny ainy hatramin'izao.
fiaramanidina mpanaramaso P-3C Orion. Ao amin'ny Twitpic nalefan'ny @FarrukhSiddiqui
Tsy niandry fotoana ela ireo mpampiasa Twitter pakistaney nanaparitaka ny vaovao sy nizara ny fihetsehampony. Ambangovangony tamin'ireo fifanakalozan-kevitra:
Osman avy ao Lahore, ao Pakistan, nitatitra hoe :
@BitHack3r: PNS Mehran notafihan'ny mpampihorohoro. – Rehman Malik #Pakistan #Karachi
@BitHack3r: Fiaramanidin'ny tafika an-habakabaka efatra motera voan'ny mpampihorohoro, mbola mirehitra. #Karachi #Pakistan
@BitHack3r: Mbola ao anatin'ny PNS Mehran (toby Faisal) ao ny mpampihorohoro . – Rehman malik
Saad nampilaza hoe :
@kursed: Avy amin'ny lafy telon'ny PNS Mehran no niavian'ireo mpanafika ; Dalmiya, Gulistan e Johar ary Shahrah e Faisal
@FK_kashmir: #fipoahana teo akaikin'ny toby an-habakabaka Faisal. Afaka tazanina eny amiko ny setroka matevina sy ny famantarana ny loza miseho, afaka mahare feom-basy avy any ihany koa #Karachi #Pakistan
@Bixenjo (Sikander Bizenjo): Tifitra sy fipoahana ao amin'ny tobin-tafika an-habakabaka ao Karachi ; fipoahana eo amin'ny roapolo eo no re avy ao. Miakatra eny amin'ny habakabaka ny setroka noho ny fipoahana mahery vaika. #Pakistan
@javeednusrat: loharanom-baovao azo antoka mikasika izany no manizingizina fa nanomboka tamin'ny alalan'ny fitifirana balafomanga ny fanafihana fa tsy tamin'ny alalan'ny fanapoahana baomba. Hita taratra tokoa fa fanafihana efa nomanina tsara sy mialoha izany.
@ammaryasir: 5 no naratra ka vahiny ny iray, toa teratany sinoa.
@faizanlakhani: tsy andrenesam-bovao ao amin'ny toby Faisal sy Mehran
@terminalxpk: NSSG (Komandon'ny tafika an-habakabaka) nitsofoka tamin'ny alalan'ny angidimby tao amin'ny faritra misy ny fifampitifirana, manomboka ny valim-panafihana #Karachi #Pakistan
@kfaroqi: Namono talibana 6 an'ny jamat e islami sy mpampihorohoro al qaida ao PNS Mehran ny tafika pakistaney . Tsara izany #karachi #Pakistan #mqm
@hiranajam: PNS Mehran, Toby Faisal voadio tanteraka – afa-tsy ny foto-drafitr'asa nialokalofan'ny mpampihorohoro – Tatitra
Khaver Siddiqi namariparitra ny zava-misy :
@Thekarachikid: Nisy ny 11/9, ny 26/11 ary ny 7/7.
Ary misy foana isan'andro ao Pakistana. #prayforpakistan (mivavaha ho an'i pakistana)
Fihetsehampo hafa :
@faisalkapadia Mifohaza ianareo, adintsika io, manafika antsika izy ireo fa tsy ny hafa, ampiasao ny fomba rehetra mba handresentsika azy mialoha ny hanapotehany antsika #pakistan
@adnanrasool: Toa manana tsindrimandry aho fa.. mikendry ny hamotika ny fiaramanidin'ny tafika an-habakabaka #pakistan ny fanafihana ao Karachi … mampatahotra ao #karachi
@faisalkapadia: Mponina ao #karach, voatafika isika ka tsy maintsy mivondrona sy tsy hatahotra! Milamìna fotsiny, tsy misaraka isika manoloana izao toe-javatra izao . #mehran
Raha hanaraka ny zava-mitranga, araho ny tenifototra #Karachi, #Pakistan, #KarachiAttacks ary #mehran.